I-VT050 - Umshini Wokuhlola Wokulahla wezitsha - Ukuhlolwa kokugunyazwa kwe-UN
by Ubunjiniyela beDelta / NgoMsombuluko, 14 Okthoba 2019 / Ishicilelwe ku Izinsimbi Zokuhlola Zokwehlisa
I-VT050 ingumshini wokuhlola ovulekile oguquguqukayo, owenziwe ngokufana namazinga wakamuva wokuphepha.
Yenzelwe ukuhlolwa kwezigubhu zepulasitiki, iziqukathi, ukupakisha, njll.
I-VT050 iqukethe itafula lokuphakamisa elingaphezulu elilungele izinhlobo eziningi zemikhiqizo (izikhwama, amabhokisi, amabhodlela, njll.). Ithebula lingaphakanyiswa ngokuzenzekelayo kumaphiko ahlukile okwehla bese livuleka liye phansi ukuze into iwele. Lokhu kuklanyelwe ngendlela yokuthi itafula livuleka ngokushesha kunokuwa kwemikhiqizo.
Uhlelo lonke netafula lokuphakamisa livikelwe luhlaka lwensimbi luvulwe ohlangothini olungaphansi. Kunikezwe umnyango ngaphambili wokufinyelela etafuleni lokulayisha, ukulungisa noma lokuhlanza imisebenzi.
▼Izinsimbi Zokuhlola Zokwehlisa